Best Madasha software ilaa iyo 2004
more ...Waqtiga lagu dallaco waqtiga caadiga ah 0.1 sekan
Diiwaangeliso madal lacag la'aan ah
U dooro koonto magac (subdomain-kaaga) oo bixi cinwaanka emaylkaaga. Fadlan la soco in lambarkaaga furaha ah ee maamulaha loo wareejin doono cinwaanka emaylkaaga. Marna kuu soo diri doonno spam ama xayeysiin. Xitaa sidaas oo ay tahay, emaylka leh furaha furahaaga maamulaha ayaa laga yaabaa inuu ku jiro faylkaaga spam.
Halkan waxaad si fudud uga abuuri kartaa gole bilaash ah oo awood leh! Abuur oo naqshadeyso Madasha Beeshaada dhowr dhagoodyo uun. Soo ogow sida ugu fudud ee loo maareeyo iyo astaamaha golahaaga bilaashka ah. Barnaamijkeena software-ka ayaa si joogto ah loo horumariyaa, dayactirka iyo cusboonaysiinta amniga ayaa si joogto ah loo fuliyaa. Hawlaha cusub iyo dib-u-habeeynta waxaan heysanaa dhag u furan hamiyada. Ka faa'iidayso sannadaha badan ee khibradaheenna ah ee ku saabsan martigalinta baraha internetka. Waxaan ilaalinaynaa amniga iyo helitaanka adeegayaashu. Cusbooneysiinta joogtada ah ee softiweerku waxay xaqiijineysaa in arrimaha amniga si dhaqso leh loo xaliyo.
Magaca Koontada [A-z iyo 0-9]: .fboard.de
Halkan waxaad si fudud uga abuuri kartaa gole bilaash ah oo awood leh! Abuur oo naqshadeyso Madasha Beeshaada dhowr dhagoodyo uun. Soo ogow sida ugu fudud ee loo maareeyo iyo astaamaha golahaaga bilaashka ah. Barnaamijkeena software-ka ayaa si joogto ah loo horumariyaa, dayactirka iyo cusboonaysiinta amniga ayaa si joogto ah loo fuliyaa. Hawlaha cusub iyo dib-u-habeeynta waxaan heysanaa dhag u furan hamiyada. Ka faa'iidayso sannadaha badan ee khibradaheenna ah ee ku saabsan martigalinta baraha internetka. Waxaan ilaalinaynaa amniga iyo helitaanka adeegayaashu. Cusbooneysiinta joogtada ah ee softiweerku waxay xaqiijineysaa in arrimaha amniga si dhaqso leh loo xaliyo. Shuruudaha adeegsiga astaanta ayaa la adeegsan doonaa.